Nzuzo Isii ahụ nke ọdịnaya na-efe efe | Martech Zone
Nke anyi E gosipụtara Jenn Lisak maka ndụmọdụ ya mgbe ị na-emepe ọdịnaya. Kedu ihe ọ ga-ewe, kpọmkwem, ka ọdịnaya wee na-efe efe? Prọfesọ na-ere ahịa Jonah Berger dere banyere ya n'akwụkwọ ya, Na-efe efe: Ihe Mere Ihe Ji Agbachi.
Dị ka Prọfesọ Berger si kwuo, ihe mbụ bụ mmetụta uche. Ọ bụrụ na ọdịnaya gị anaghị ejikọ ndị na-ege ntị na mmụọ, enweghị ohere ọdịnaya ga-efe efe. WhoIsHostingThis.com etinyela nke a infographic nke Prọfesọ Berger si Nchoputa!
Tags: na-efe efe ọdịnayaNa-efe efe: Ihe Mere Ihe Ji AgbachiJona Bergermalitere ịrịa
Ọkt 27, 2013 na 3:19 AM
Ọzọ nnukwu post Doug! Enwere m nnukwu oge ịgụ ya. Daalụ maka ịkekọrịta!…